MasterCard's CFO: Cryptocurrency kutenga vari boosting redu mutengi mari - Blockchain News
Kukadzi 1, 2018 arun
Mastercard raMwari CFO: Cryptocurrency kutenga vari boosting redu mutengi mari
Mastercard rakaona kuwedzera kushandiswa pamwe nokuda vanoshandisa vanotenga cryptocurrency.
Muripo samambure muchinjikwa-pamuganhu mavhoriyamu – chiyero mutengi mari kunze – mamuka 22 muzana saka kure gore rino, dzakawedzerwa pamwe nevatengi vachishandisa makadhi avo kutenga digitaalinen dzeEurope, akati Chief Financial Officer Martina koira-montvert musi weChina. Higher mari iri kufamba zvokuEurope zvakabatsirawo, akati.
"Just kuva akajeka, tisingadi chinja kana kugadzirisa cryptocurrency kwema pamusoro pomumbure yedu,"Koira-montvert akati ari kufona chete vaongorori. "Zvirongwa Our havaedzi ichi mhando yebasa acharamba sezvo hatina mutsetse nokuona kuti sei cardholders achaita maonero cryptocurrencies mune ramangwana."
Tony Robbins & Ko Bitcoin ...
Previous Post:Zvibereko ASIC Chips kubva Samsung
Next Post:Ups Files bvumidzwa kugamuchira Bitcoin nokuda lockers